Guriga - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Qorshayaashu waxay ka bilaabanayaan $ 0
Miyaad ka heshaa inta ugu badan qorshahaaga Medicare?
Waan kugu dhex socon karnaa xulashooyinkaaga.
In ka yar toddobaad ayaa hadhay! Is-diiwaangelinta sannadlaha ahi waxay dhammaanaysaa Dec 7.RAADI QORSHEYGA
Waxaan Sameyneynaa Doorashada Qorshe Caafimaad oo Fudud
Soo ogow waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato caymiska Medicare oo isbarbar dhig dhammaan xulashooyinka qorshaha Advantage. Waxaan tagi doonaa maylka dheeriga ah adiga oo kugu xiraya qoyskeena bixiyeyaasha xanaanada caafimaadka waxaanan ku siineynaa faa iidooyin badan si aan caafimaadkaaga ugu ilaalino inta udhaxeyso baaritaanada.
Waxaan ku soo dhawaynaynaa daryeelka caafimaadka guriga. Gali meesha aad ku jirto aaladda raadinta oo ka baaraandeg liistada bixiyeyaasha iyo takhasusayaasha aaggaaga.
Raadi caymiska Medicare ee adiga kuu shaqeeya. Sahaminta ikhtiyaarrada qorshayaasheena, isbarbar dhig faa'iidooyinka, isqor maanta!
QORSHE ISKU DAR
Horeba xubin ma u ahayd? Ka faa'iideyso xarunta xubinta. Waxaad ka heli kartaa dukumiintiyada qorshaha, daabacan kartaa kaarkaaga Aqoonsiga xitaa waxaad ku bixin kartaa biilasha khadka tooska ah adoo isticmaalaya boggayaga amni.
Sida Aan U Dareyno
Marka aan nahay CHPW, beeshu kaliya ma ahan magaceena - waa sida aan u gaarsiino daryeelka. Waxaan had iyo jeer raadineynaa habab cusub oo aan ugu adeegno xubnaheenna, bixinta wicitaannada soo-galitaanka, ilaha bulshada markii aad u baahatid, iyo waxyaabo kaloo badan.
Daawo: Medicare Advantage iyo Asalka Medicare
Medicare wuu sii murgi karaa. Fiidiyowgan 2-da daqiiqo ah, khabiirka caafimaadka ee shatiyeysan ee Brisa Guajardo wuxuu sharxayaa farqiga muhiimka ah ee u dhexeeya Dheefta Medicare iyo Medicare-ka Asalka ah, iyo waxa ay adiga kaaga jeedaan.
65 sano buu noqonayaa sanadkan?
Waqti aad ku bilaabato safarkaaga Medicare! Isqoristu waxay qaadataa oo kaliya 6 talaabo oo fudud.
Macluumaadka iyo agabka ku saabsan tallaallada COVID-19 ee WA
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Qiimeynta Xiddigaha Macaashka ee 'Medicare Washington'.